Qatar Airways waxay soo bandhigtay Boeing 787-9 Dreamliner cusub oo leh Suugaan Ganacsi oo cusub |
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Warka Safarka Qatar » Qatar Airways waxay soo bandhigtay Boeing 787-9 Dreamliner cusub oo leh Suugaan Ganacsi oo cusub
Diyaaradda Ultramodern waxaa loo qorsheeyay adeegyo ka kala socda Doha ilaa Athens, Barcelona, ​​Dammam, Karachi, Kuala Lumpur, Madrid iyo Milan waxayna wadar ahaan qaadataa rakaab dhan 311 kursi - 30 Class Class Suites iyo 281 kursi oo ka tirsan heerka dhaqaalaha.
Qatar Airways waxay sii wadaa inay si istiraatiiji ah u maal gasho diyaaradaha matoorka mataanaha ah.
Suugaanta Cusub ee Ganacsiga waxay ku qalabaysan yihiin albaabbo qarsoodi ah oo iska rogaya, qalabka mobilada oo lacag la'aana iyo 79 inji oo sariir jiif ah.
Loogu habeeyay qaab herringbone ah, qaabeynta 1-2-1, qolo kastaa waxay leedahay marin toos ah oo lagala soo baxo albaab lehna sibidh si loo hubiyo waxa ugu dambeeya ee asturnaanta iyo raaxada.
Qatar Airways bilaabi doonaa cusub Boeing 787-9 Diyaaradda rakaabka ee 'Dreamliner', oo muujineysa sida aadka ah loo sugayo Suugaanta Ganacsi ee Suite, dhowr waddo oo muhiim u ah Yurub iyo Aasiya, oo ka bilaabaneysa Doha ilaa Milan adeegga jimcaha 25 Juun 2021.
Lagu farsameeyay mid gaar ah Qatar Airways naqshadeynta DNA-ga iyo rafcaan qaadashada kuwa ugu caqliga badan ee socotada ah, 'Adient Ascent Business Class Suite' cusub wuxuu ka kooban yahay naqshad casri ah oo runtii shaqsi ah, waasac ah oo shaqeyneysa, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku nasato gurigaaga gaarka ah.
Madaxa fulinta ee shirkadda Qatar Airways, Mudane Akbar Al-Baker, ayaa yiri: “Iyadoo la tixraacayo sida ay nooga go’an tahay inaan rakaabkeenna u soo bandhigno khibrad safar oo aan la qiyaasi karin, waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno shirkaddan aadka loo rajeynayo ee Class Class Suite ee Qatar Airways’ tii ugu cusleyd dayax gacmeedyo ballaaran, Boeing 787-9 kaas oo ku bilaabmi doona dhowr waddo oo muhiim u ah shabakadeena.
Suugaanta cusub ee loo yaqaan 'Class Class Suite' waxay dejineysaa heer kale oo warshad leh khibrad gaar ah oo gaar ah oo loogu talagalay rakaabka qaaliga ah ee nala socdaalaya, taas oo sii kordheysa qiime ahaan inta lagu guda jiro aafadaas, iyada oo la soo bandhigayo heerarka 5-ta xidig ee Qatar Airways ee heer sare iyo martigelinta Qatar ee muhiimka u ah dhammaan duulimaadyadeenna.
Rakaabkeennu waxay mudan yihiin waxa ugu fiican waxaanan ku kalsoonahay inay ku qanacsan yihiin nooca weyn ee 'Dreamliner' oo ay ku raaxeysanayso cirka. Rakaabku way nasan karaan in saameynta mas'uuliyadeed ee deegaanka ay si buuxda ula jaanqaadi karto hamigeenna ah inaan gaarno heerarka ugu sarreeya ee sii jiritaanka. "
Loogu habeeyay qaab herringbone ah, qaabeynta 1-2-1, qolo kastaa waxay leedahay marin toos ah oo lagala soo baxo albaab leh sifo loo hubiyo waxa ugu dambeeya ee asturnaanta iyo raaxada. Rakaabka fadhiga qolalka ku dheggan xarunta ayaa ku dhejin kara shaashadda asturnaanta meesha taabashada badhanka si ay u abuuraan meel gaar ah oo iyaga u gaar ah oo ku lifaaqan.